४ बर्षको प्रेमपछि बिहे : युवतीले कुनै हालतमा शारी’रि’क स’म्ब’न्ध नगर्ने अठोट राख्दा जे भयो !(हेर्नुस् ) – Ramailo Sandesh
एक महिलाले विवाहपछि शा’रीरि’क स’म्ब’न्ध गर्न नमानेपछि तनाव भएको छ । भारत, उत्तर प्रदेशको मुरादाबादमा एक दुलहीले हनिमुनमा शारीरिक सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गरेकी छन् ।
यस घटनामा अचम्मको कुरा के छ भने बेहुला र बेहुलीबीच विगत चार वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध चलिरहेको थियो ।
दुवैको परिवार यो विवाहका लागि तयार थिएन । तर छोराछोरीको प्रेमका अगाडि परिवारले हार मानेर धूमधामसँग विवाह गर्नुपर्यो ।|तर हनिमुनमा दुलहीले शा’रीरि’क स’म्ब’न्ध राख्न अ’स्वीका’र गरेपछि सबै चकित छन् । हनिमुनमा बेहुलीले श्रीमानलाई शा’री’रिक स’म्ब’न्ध राख्न पटक्कै मन नपर्ने बताइन् । सुरुमा, दुलहाले ठट्टा गरिरहेको सोचे।
तर दुलहीले आफूले कुनै पनि हालतमा शा’री’रिक स”म्बन्ध नरा’ख्ने स्पष्ट पारिन् । स’म्बन्ध राख्न विल्कुल मन नलाग्ने भन्दै केटालाई स्पष्ट जवाफ दिइन् ।
यो सुनेर बेहुला छाँगाबाट खसेजस्तै हुनुपर्यो। परिवारका सदस्यले युवतीलाई धेरै सम्झाए तर उनले मानिनन् । उनले निरन्तर शा’री’रिक स’म्ब’न्ध राख्न अ’स्वीकार गरिरहेकी थिइन् । प्रेम विवाहपछि दुल’हीको हनिमुन नमनाउने निर्णयले सबै छ’क्क परेका छन् ।
यो गम्भीर विषयलाई स्थानीय पञ्चायतमा समाधान गर्ने प्रयास गरियो । तर दुलही आफ्नो जिद्दमा अ’डिग रहिन् । त्यसपछि ससुराले बुहारीलाई महिला उ’त्थान केन्द्रमा लगे । त्यहाँ बेहुलीलाई काउन्सिलिङ गरियो । तर त्यहाँ पनि उनले शा’री’रिक स’म्ब’न्ध राख्न अस्वीकार गरिन् । त्यसपछि दुवैले आ–आफ्नो इच्छाले यो सम्बन्ध अन्त्य गर्ने निर्णय गरे ।
नारी उत्थान केन्द्रकी काउन्सिलर रितु नारङले यो प्रेमकथा भएको बताउनुभयो । जसमा केटी र केटाबीच विगत ४ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध चलिरहेको थियो । युवतीले आफ्नो प्रेमीलाई विवाह नगरे विष खाएर आत्महत्या गर्ने बताएकी थिइन् । केटीले केटाकी आमा र भाउजुलाई पनि सो कुरा भनेको खुलेको छ ।
यति मात्र होइन, युवती ससुराको घर गएर बिहे नगरे विष खान्छु भन्थिन् । त्यसपछि केटाले भने, ‘ठीक छ, हामी बिहे गर्छौं ।’ केटाकी आमा केटीका परिवारका सदस्यकहाँ गइन् । उनीहरुले बिहेको कुरा उठाए । केटी पक्षका मानिसहरू यो बिहेका लागि तयार थिएनन् । तर छोरीको आग्रहसामु उनीहरु पराजित हुनुपर्यो । दुवै परिवारले खुशीसाथ छोराछोरीको विवाह गर्दियो । विवाहपछि हनिमुन भएको दिन युवतीले भनिन्, ‘म कम्फर्टेबल छैन’ अर्थात् ‘म शा’री’रिक स’म्ब’न्धका लागि तयार छैन ।
’ जबकि दुवैको प्रेम सम्बन्ध चार वर्षसम्म चलेको थियो । ती युवतीको उमेर २३ वर्ष भएको बताइएको छ ।
काउन्सिलर रितु नारङका अनुसार केटाले केटीलाई असाध्यै माया गर्छन् । केटाले केटीलाई भने, ‘तिमीलाई जब सहज हुन्छ मलाई भन ।’ त्यसपछि नवदुलही घुम्न आफ्नो माइतीघर गइन् । फर्केर आउँदा श्रीमानले सोधे के समस्या छ ? त्यसपछि उनले भनिन्, ‘मलाई शा’री’रिक स’म्बन्धका लागि खु’बै डर लाग्छ । म शारी’रिक स’म्बन्ध राख्दिन ।’
यो गम्भीर विषयलाई स्थानीय पञ्चायतमा समाधान गर्ने प्रयास गरियो । तर दुलही आफ्नो जिद्दमा अ’डिग रहिन् । त्यसपछि ससुराले बुहारीलाई महिला उ’त्थान केन्द्रमा लगे । त्यहाँ बेहुलीलाई काउन्सिलिङ गरियो । तर त्यहाँ पनि उनले शा’री’रिक स’म्ब’न्ध राख्न अस्वीकार गरिन् ।